ग्यास्ट्रिकका रोगीले चाडबाडमा कस्तो खानपान गर्ने ? - ग्यास्ट्रिकका रोगीले चाडबाडमा कस्तो खानपान गर्ने ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १ कार्तिक, 07:25:50 AM
काठमाडौं । नेपाली हिन्दूहरूका दुई ठूला पर्व दसैं र तिहार नजिकिँदैछन् । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यी चाड र खानपान सँगसँगै जोडिएर आउने गर्छन्।
दसैंमा आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सबैले घरमै विशेष परिकार बनाएर आफन्तसँगै बसेर खाने चलन छ । यसरी पाक्ने खानाहरू प्रायः चिल्लो तथा मसलायुक्त नै हुने गरेको पाइन्छ। अरू परिकारमा पनि चिनीजन्य पदार्थको बढी प्रयोग हुन्छ, त्यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक होइन। रमाइलो गर्ने बहानामा धुम्रपान र मद्यपानको पनि बढी नै प्रयोग हुन्छ।
यस्ता खानेकुराले कोलेस्ट्रोल तथा ग्यास्ट्रिक, ब्लडप्रेसर, डायबिटिज, दम, युरिक एसिड जस्ता समस्या बल्झाउँछ। चाडपर्वमा विशेषगरी खानपानमा नियमितता हुन्न। बढी चिल्लो, अमिलो, पिरो, नुनिलो मसालेदार खानाको अत्यधिक सेवनले पेटमा पनि गडबडी हुन्छ । यसले निम्त्याउने समस्या नै ग्यास्ट्राइटिस हो । यसले पेटमा निकै ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।
खाने नली, पेट र सानो आन्द्राको कुनै भागमा घाउ हुनु अथवा सानो आन्द्रा सुन्निनुलाई पनि ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। ग्यास्ट्रिकको समस्या हुने अधिकांश नेपालीमा यी र यस्तै कारणले पेट दुख्ने हुन्छ। खानाको समय नमिल्दा र धुम्रपान तथा मद्यपानको अत्यधिक प्रयोगले ग्यास्ट्राइटिस गराउँछ।
पेटमा भएको एसिड माथि आउने क्रमलाई भने ग्यास्ट्रो इसोफ्याजियल रिफ्लेक्स डिजिज ‘जिइआरडी’ भनिन्छ । सामान्यतया पेटमा सबैलाई केही न केही समस्या आई नै रहेको हुन्छ । पेटको समस्या भन्नाले माथिल्लो पेट दुख्नु, खाना खाएपछि पेट ढुस्स हुनु, अमिलो डकार आउनु, अमन हुनु, अपच हुनु नै हो।
धेरै तनाव लिने व्यक्तिमा पनि पेटको समस्या आउँछ । पेटमा भएको एसिड तथा खाएको खानेकुरा अलिकति मात्र माथि आउँदा खाने नलीको भित्री छालामा चोट पुग्छ । जसले गर्दा छाती पोल्ने, मुटु पोल्ने, अमिलो पानी र डकार आउने हुन्छ।
जिइआरडीको समस्यालाई पनि ग्यास्ट्राइटिस भएको ठानेर आफूखुसी औषधि खाँदा सानो आन्द्रामा घाउ हुन सक्छ । कतिपयमा लामो समयसम्म पनि यस्ता समस्याले सताउने गर्छ र ती पछि गएर पेटका दीर्घ रोगी नै भएर जान्छन्।
त्यस्तै छाती पोल्ने, धेरै डकार आउने, दाँतको समस्या, स्वरमा परिवर्तन आउने रिफ्लेक्स डिजिज हो जुन एसिडको कारणले हुने गर्दछ । पेटबाट खानाको पाइपमा उल्टो दिशामा एसिड गएर त्यसले खानाको पाइप ड्यामेज गर्ने तथा घाँटी दाँत लगायत अरू अंगहरूमा असर गर्दछ । एसिडको अर्को रूप हो— रिफ्लेक्ट डिजिज।
पेटको समस्या बढ्नुको मुख्य कारण नै खानाको गडबडी, खानामा बढी चिल्लो पिरो तथा अमिलो पदार्थको सेवन हो । त्यस्तै, विभिन्न किसिमका पेय पदार्थहरूको सेवन, धुम्रपान, कामको चापले गर्दा उत्पन्न हुने तनाव, एन्जाइटिक जस्ता कारण ग्यास्ट्रिक एसिड बढेर ग्यास्ट्रिकको लक्षणहरू देखा पर्दछन्।
विशेषगरी गरिब राष्ट्रहरूमा पानीबाट सर्ने ब्याक्टेरिया जुन हामं्रो पेटमा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ, जसलाई ‘हेलिकोब्याक्टर प्लोरी’ भनिन्छ । यसको कारणबाट पनि पेटमा विभिन्न समस्या उत्पादन हुने गर्छ । ग्यास्ट्रिक हुने र पछि त्यसैबाट अल्सर समेत हुने गर्छ । सरसफाइको अभाव भएको क्षेत्रमा यस्ता किसिमका ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर्ने गर्छन्, जसको मुख्य स्रोत फोहोर पानी नै हो।
ग्यास्ट्रिक गराउने अन्य कारक तत्वमा विभिन्न औषधि पनि पर्छन् । दुखाइ कम गराउने ब्रोफिन, आयुर्वेदिक औषधिहरूले पनि ग्यास्ट्रिक गराउँछन्।
ग्यास्ट्रिक हुँदा पेट फुल्ने, खाना अपच हुने जस्ता सामान्य लक्षणहरू देखा पर्छन् । समयमै सामान्य औषधि सेवन गर्ने हो भने ठिक त हुन्न तर बल्झिइहाल्यो भने यसले भयंकर रूप लिन्छ। ग्यास्ट्रिक बल्झिएमा अल्सर हुने र त्यसबाटै ब्लिडिङ भएर उल्टीमा रगत देखिने, पिसाब कालो हुने, तौल कम हुने जस्ता जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छन्।
चाडपर्वको समयमा कलेजोको रोग बल्झिने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ । विशेषगरी अल्कोहल, पेय पदार्थको सेवनले कलेजोमा समस्या निम्तिन्छ । कलेजोको समस्या हुने मान्छेले मदिरापान बढी गर्दा जन्डिस पनि थपिन हुन्छ।
लामो समयदेखि ड्रिंक्स गर्नेहरूको कलेजोमा संक्रमण भइसकेको हुनाले चाडपर्वहरूमा सचेतता अपनाउनुपर्छ । रमाइलो गर्ने बहानामा मदिरा स्वाट्ट पार्दा कलेजो ड्यामेज हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । यस्तोमा उल्टीमा रगत जाने, पेटमा पानी जम्ने, खुट्टा सुन्निने जस्ता लक्षण देखा पर्दछन्।
कलेजोको समस्या ड्रिंक्ससँग सम्बन्धित हुन्छ । धेरै पदिरा सेवन गर्नेको मात्र कलेजो खराब हुन्छ भन्ने होइन मादक पदार्थ सेवन नगर्ने व्यक्तिलाई समेत कलेजोको समस्या हुन सक्छ।
कलेजोका बिरामी दुई प्रकारका हुन्छन्— मादक पदार्थ सेवन गर्ने र नगर्ने । अहिले मादक पदार्थ सेवन नगर्नेहरूमा पनि यो समस्या बढ्दै गएको छ । ब्लडप्रेसर, सुगर, अत्यधिक मोटोपन अनि फास्टफुड खाने सहरी वर्गका मानिसमा कलेजोको समस्याहरू देखा पर्ने गरेको पाइन्छ।
उत्साह उमंगको समयमा खुसी साट्न मदिरा नै सेवन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। लगातार ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने दुई घन्टाको फरकमा खाना खाने, जसले गर्दा पेट खाली हुने समय कम हुन्छ। बढी समय पेट खाली राख्दा त्यसमा ग्यास जम्मा हुने गर्दछ, जसले पेट दुखाउने, फुलाउने काम गर्छ। त्यसैले सादा हल्का खानेकुरा दुई घन्टाको फरकमा सेवन गरिरहने बानी बसाल्नुपर्छ । बिहान उठ्नेबित्तिकै दुई गिलास पानी खाने गर्नुपर्छ, जसले खानाको पाइप सफा राख्न तथा पेट सफा राख्न मद्दत गर्दछ । दिनमा लगातार पानीको मात्रा भइराख्नुपर्दछ।
चाडपर्वमा खाना बनाउँदा कम तारेको परिकार बनाउने, अमिलो, पिरोतिर नलाग्ने, आफ्नो खानाको व्यवहारमा नियन्त्रण ग¥यो भने ग्यास्ट्रिक बल्झिने सम्भावना कम रहन्छ । यसरी ध्यान दिँदा पनि पेटको समस्या समाधान भएन भने अस्पताल गएर जेकजाँच गरी उपचार गर्नुपर्छ।
ग्यास्ट्रिकको समस्या भएका व्यक्तिले विशेषगरी आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढी गरेको पाइन्छ । बिना परीक्षण र त्यसको विश्वसनीयता जाँच गरेपश्चात् मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।
‘डा. शर्मा वयोधा अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ हुन् ‘
२०७५, १ कार्तिक, 07:25:50 AM